ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဂြိုဟ်သားတွေ၊ အာကာသယာဉ်တွေ၊ မာယာလူမျိုးတွေနဲ့ ရှေးအီဂျစ်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ကမ္ဘာအတွင်းထဲက အခြားကမ္ဘာတွေ စသဖြင့်သော အကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော့် စိတ်ကို အတော်လေး လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်အခါ ကြည့်ကြည့်၊ ဘယ်တော့ဖတ်ဖတ် မရိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေပေါ့… စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတာကိုး.. ကြီးလာတော့ တချို့ဟာတွေက အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ သိလာတယ်၊ အချို့အရာတွေက စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ဆိုတွေ နားလည်လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်း ကြိုက်မြဲ ကြိုက်ဆဲပါပဲ 😀 ဆိုတော့ ဘယ်ဇာတ်ကားတွေ၊ ဘယ်စာအုပ်တွေ၊ ဘယ်လို သီချင်းတွေကို ရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်….။
(ရုပ်ရှင်) မှာတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ခုချိန်ထိ စွဲလမ်းရဆဲ ဇာတ်ကားတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ “Koi Mil Gaya” ပါတဲ့.. ဟုတ်ပါတယ်။ Sci-fi လို့ခေါ်တဲ့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ဟောလိဝုဒ်ရပ်ဝန်းက အထွက်များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ “Koi Mil Gaya” ကတော့ ဘောလိဝုဒ်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပထမဆုံး သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်မှုရဲ့ ရလဒ်ကတော့ “Krrish” နဲ့ “Krrish- 3” တို့လို Koi Mil Gaya ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေ ထွက်ရှိလာနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ (ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း အမြင်အရတော့ ဒီ ၃ ကားမှာ Koi Mil Gaya က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး Krrish ကတော့ မဆိုးတဲ့ထဲ ပါပါတယ်။ အရမ်းကြိုက်လှတယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့.. Krrish3ကတော့ ကျွန်တော့်အကြိုက်နဲ့ လားလားမှ မကိုက်လို့ ဆိုရမလားတောင်မသိ :D)
Koi Mil Gaya အကြောင်း ပြန်ကောက်ရရင် ဉာဏ်ရည်မပြည့်မီတဲ့ လူသားတစ်ယောက်၊ မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ် ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဂြိုဟ်သားလေးတစ်ကောင်၊ သားဖြစ်သူအတွက် စိတ်မချမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ပုံအပ်ထားတဲ့ မိခင်တစ်ဦးတို့ကြားထဲက သံယောဇဉ်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ပုံဖော်ပြသွားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားလို့ ဆိုရမှာပါ။ ၂၀၀၃ တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားမို့ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ သိပ်မပီပြင်မသပ်ရပ်ပေမဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဇာတ်အိမ်က ဒီအချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ နောက် ဘောလိဝုဒ်ထုံးစံ သီချင်းနဲ့ အကတွေက တစ်ချက်တစ်ချက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်လို ဒီကားကို အရမ်းခရေဇီဖြစ်တဲ့သူတောင် အာရုံနောက်သေးတာကလား 😀 ) ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းတော့ ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူး၊ ဇာတ်ကားထဲပဲ ကြည့်ကြနော့်….
(စာအုပ်)ကိုကတော့ ကျွန်တော်က H Rider Haggard ရဲ့ When The World Shook ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ ဇနီးဖြစ်သူကို အရမ်းချစ်လွန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ ဇနီးဖြစ်သူကလည်း တစ်ရက် သူမကြာခင်မှာ သေရတော့မယ်လို့ သူ့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ဘယ်ယုံနိုင်ပါ့မလဲ။ ဆရာဝန်တွေကစ ဇနီးသည်မှာ ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး အကောင်းအတိုင်းပဲလို့ ဆိုကြတာကိုး… ဒါပေမဲ့ တကယ်ပဲ ဇနီးဖြစ်သူက သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မဆုံးပါးခင်မှာတော့ သူ့ကို တစ်နေရာကို ခရီးထွက်ရမယ်၊ ဒီခရီးရဲ့ အဆုံးမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ပြန်တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ ဆုံးပါးပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ သူဟာ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုခေါ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူမှာကြားခဲ့တဲ့ နေရာကို ချက်ချင်း ခရီးထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ဒီခရီးမှာ ဘာတွေကြုံတွေ့ရမှာလဲ? ဇနီးနဲ့ရော တကယ်ပဲ ပြန်တွေ့နိုင်မှာလား? ဆန်းကြယ်မှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ခရီးတစ်ခုရဲ့ အဆုံးသတ်ကရော ပျော်ရွှင်စရာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? စတာတွေကိုတော့ ဝတ္ထုထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့ရမှာပါ။
တကယ်တော့လေ… ဒီဝတ္ထုက မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ အဆန်းတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်ဗျ… ဘာလို့ဆိုတော့ ဆရာကြီး ဒဂုန်ရွှေမျှားက ဒီစာအုပ်ကို “ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ” နာမည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ မူရင်းစာရေးသူ ဆာရိုက်ဒါဟတ်ဂတ်ဟာလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ မစိမ်းလှပါဘူး။ စာရေးသူနာမည်မကြားဖူးတောင်မှ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင် အလန်ကွာတာမိန်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဟီးရိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်လား…. ဆိုတော့ မှာနေကျအတိုင်း ဖတ်မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းဝတ္ထုကို ဖတ်ပါ။ မနိုင်ဘူးဆိုတော့မှသာ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုကို ဖတ်ပါ။ မူရင်းကို မဖတ်ကြည့်ရသေးဘဲ ဟာ.. ပျင်းစရာကြီး စာလုံးတွေ ရှာနေရဦးမှာလို့ တွေးပြီး မဖတ်ဘဲတော့ မနေပါနဲ့နော်… ဖတ်ကြည့်ပြီးမှသာ ဖတ်နိုင်မဖတ်နိုင်သိမှာမဟုတ်လား… ကဲ… ဒါဆို (သီချင်း) ဆီကို သွားကြရအောင်…
အဆိုတော် Pitbull ဆိုရင်တော့ အားလုံးလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သီချင်းဗီဒီယိုတိုင်းမှာ ကောင်မလေးတွေအများကြီး ဝိုင်းပြီး ကတုံးကြီးနဲ့ အထာကျကျ သီချင်းဆိုတတ်တဲ့ ဘဲကြီးပေါ့… နေပါဦး ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့.. ခင်ဗျားပြောတော့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဆို ဒီဘဲကြီးနဲ့ သူ့သီချင်းတွေက ဘာများ ထူးဆန်းလို့လဲလို့ ပြောတော့မလို့လား? ဆန္ဒမစောပါနဲ့ဦး.. ပြောပြမှာပေါ့…
ခု ကျွန်တော် ပြောပြချင်တဲ့ သီချင်းကတော့ Pitbull နဲ့ ရှကီရာတို့ရဲ့ ၂၀၁၂တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Get It Started” ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ အရင်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ စာသားလေးတွေကိုပါ အာရုံစိုက်နော်… သီချင်းလေးနားထောင်ရင်းနဲ့ သတင်းအဟောင်းတွေ ပြန်မွှေပါဦး…. အဝေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးရယ်.. ၂၀၁၄ လောက်တုန်းက သတင်း … မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ လေယာဉ် MH 370 ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာလေး… ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တော့ အားလုံးလည်း မှတ်မိကြမှာပါ။ ကဲ… သတင်းလည်း ရပြီဆိုတော့ သီချင်းနဲ့ သတင်း ချိန်ထိုးကြည့်ရအောင်… ထပ်ပြီး ပြောဦးမယ်နော်.. သီချင်းထွက်တာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လေယာဉ်ပျက်ကျတာက ၂၀၁၄ ခုနှစ် ။ ကဲလာပြီ… သီချင်းစာသားလေး.. ‘Now it’s off to Malaysia’ ဆိုတာနဲ့ ‘Two passports, three cities, two countries, one day’ ဆိုတဲ့ စာသားလေးတွေ။
ပထမ စာသား – Now it’s off to Malaysia – မလေးရှားကနေ ထွက်လာခဲ့ပြီ။ ဟုတ်ပြီ။ MH 370 ရဲ့ လမ်းကြောင်း ဘယ်ကနေ ဘယ်ကို ထွက်ခွာလာတာပါလိမ့်… မလေးရှား ကွာလာလမ်ပူကနေ၊ တရုတ်ပြည် ဘေဂျင်းကို… အင်း ဒီမှာ ဒုတိယ စာသားနဲ့ဆက်မယ် “Two passports, three cities, two countries, one day” MH370 ပေါ်က တခြား သတင်းအပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ နွှယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Two Passports – ပတ်စ်ပို့ ၂ ခုဆိုတာသည် လေယာဉ်ပေါ်က အီရန်လူမျိုး နှစ်ယောက် ခိုးယူလာခဲ့တဲ့ ဩစတြေးလျန်း အီတာလျံ ပတ်စ်ပို့ ၂ခု ပါ။ မြို့ ၃မြို့ဆိုတာကတော့ မလေးရှား၊ တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်တို့ရဲ့ မြို့တော်တွေကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်နိုင်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကတော့ မလေးရှား နဲ့ တရုတ်ပါ။
အိုခေ..ပထမ စာသား “Now it’s off to Malaysia” ရဲ့ စာသားအပြည့်က ဒီလို ‘No Ali, No Frasier, but for now off to Malaysia’ ဆိုပါရောလား…. တိုက်ဆိုင်တာ တစ်ခုက ပတ်စ်ပို့ခိုးလာတဲ့ အီရန်လူမျိုး ခရီးသည် နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်က Mr. Ali ပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တော့ သူ့ရဲ့ တကယ့်တကယ် နာမည်အရင်းက Mr. Ali မဟုတ်ဘဲ Pouria Nourmohammadi လို့ ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါဆို No Ali ဆိုတာကြီးကလည်း မှန်နေသလို မဖြစ်နေပြန်ဘူးလား -_-
တတိယအကြိမ် ထပ်ပြောပါမယ်.. သီချင်းထွက်တာ ၂၀၁၂ ကဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပျက်ကျတာ ၂၀၁၄ မှပါနော်… မယုံနိုင်စရာပဲ ဟုတ်? ကျွန်တော်လည်း ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရင်း တွေ့လာတာရယ် ဟီးဟီး.. ဆိုတော့ ဟုတ်မဟုတ် သိရအောင် ခုပဲ သီချင်းလေး ရှာဒေါင်းပြီး နားထောင်လိုက်ပါဦး… ပြီးတော့ တခြား တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေ ထွက်လာလည်း ပြန်ပြောပြပေါ့…
Previous Previous post: အပတ်စဉ် နည်းပညာသတင်းတိုများ
Next Next post: အရသာပျက်စေနိုင်တဲ့ ချက်ပြုတ်နည်း အမှား ၅ မျိုး
ရှက်ရမှာကို ရှက်နေတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို ရိုက်ကူး၊ တည်းဖြတ်၊ တင်ဆက်- ချယ်ရီTeam(ရိုးရာလေး) Post Views: 518